Magdhaw dad yaraantoodii la dhibay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dad badan ayaa sheegay in la xumeeyay goor ay ku jireen guryaha caruurta lagu xanaaneeyo, sawirka midigta waxa ka muuqda wasiirka caruurta iyo waayeelka. Maria Larsson, Sawirle: Scanpix
Magdhaw dad yaraantoodii la dhibay
La daabacay torsdag 10 maj 2012 kl 11.11
Waxa lagu tala jiraa in la sameeyo hayad qaabisha qaybinta magdhawga caruurtii lagu xumeeyay guryaha caruurta lagu koriyo intii u dhaxaysay sannadkii 1920 iyo 1980, arinkan ayaa maanta dawladu goaan ka gaadhaysaa.
Arinkan ayaa dhamaan xisbiyada dalka soo dhaweeyeen marka laga reebo xisbiga cunsuriyiinta ee Sverigedemokraterna.
Hayadan ayaa qiyaasaysa haddii dadyoowgaasi ay xaq u leeyihiin lacagta magdhawga oo ah 250 000, sidaas waxa sheegay wasiirka caruurta iyo waayeelka, Maria Larsson, mar ay u waramaysay laanta wararka ee Ekot.
- Arintani waxay ku saabsantay in caala qof loo eego. waxay noqon kartaa mid hal mar ku dhacday shaqsi qudha oo loo arki karo mid khatar ah, waxay kale oo ay noqon kartaa mid gacan saar mudo badan soconayey. arintani maa ahaa shaqo maxkamadeed, qofku waa in u ahaado mid runta xaqiiqda ka sheegaya wixii u la soo kulmay wakhtigaas iyo nooca ay yihiin, ayey sheegtay Maria Larsson.